चिनियाँहरु झै मधेसी वा भारतीयले प्रहरी माथी हातपात गरेको भए के हुन्थ्यो ? यस्तो छ डा. अहिराजको जवाफ:Nepalpana - Nepal's Digital Online
चिनियाँहरु झै मधेसी वा भारतीयले प्रहरी माथी हातपात गरेको भए के हुन्थ्यो ? यस्तो छ डा. अहिराजको जवाफ:
नेपालपाना बैशाख २७ २०७७
काठमाडौं । हिजो शुक्रबार सिंहदरबारको मुख्‍य गेटमा चिनियाँ नागरिकहरु नेपाल प्रहरीमाथि अक्रमणकारी झैं प्रस्तुत भएका थिए ।
शुक्रबार दिउँसो धर्ना दिन सिंहदरबारको मुख्‍य गेट अगाडि जुलुससहित आएका चिनियाँ नागरिकहरु नेपाल प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेको थियो । चिनियाँ नागरिकहरुको आक्रमणमा परि डीएसपी हरिबहादुर बस्‍नेतसहित ४ जना प्रहरी घाइते भएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा सप्तरीका पत्रकार बैधनाथ यादवले डा. राजेश अहिराजसँग केही प्रश्न गरेका छन् । यादवले डा. अहिराजसँग ‘कुनै मधेसी वा भारतीय नागरिकले यस्तो हर्कत (प्रहरीमाथी चिनियाँ नागरिकले सिंहदरबार अगाडि गरेको हर्कत) गरेको भए के हुन्थ्यो ?’ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।
डा. राजेश अहिराजले पत्रकार बैधनाथ यादवको प्रश्नको जवाफ दिदैँ भने - ‘तपाइँको प्रश्नको जवाफ आज सार्वजनिक रुपमै दिन मन लाग्यो। तपाईंले हिजो नेपाल प्रहरीमाथी चिनियाँ नागरिकले सिंहदरबार अगाडि गरेको आक्रमण बारे सोध्नु भो– के आज कुनै मधेसी वा भारतीय नागरिकले यस्तो हर्कत गरेको भए के हुन्थ्यो ? जवाफको प्रतिक्षामा छु। मेरो जवाफ - ९९% बुद्धिजीवी, पत्रकार, राज्य निकायले ती आक्रमणकारीलाई १००% जेल हाल्थे। आक्रमणलाई गोलि हान्नु पर्ने वा आजिवन कारावास दिनु पर्ने मागसहित सयौ अपिल, टिभी अन्तर्वार्ता, रेडियो अन्तर्वार्ता, लेख र छलफल आउथ्यो। भारतियले गरेको भए दूतावास घेराउ, मोदिको पुत्ला दहन, राजदुतलाई माफिनामा र अन्य भारतीयलाई असुरक्षित गराउने काम हुन्थ्यो।
मधेशीले गरेको भए एक खाले पहाडे रास्ट्रवाद उर्लिन्थ्यो, मधेशीलाई कार्यवाही, भारतीय षड्यन्त्र र आम मधेशीले सामुहिक अपमान केही दिन सम्म भोग्नु पर्थ्यो। चल्दै गरेको सन्सद मै आक्रमणको बिरुध भाषण हुन्थ्यो। आजका पत्रपत्रिकामा बिखन्डण, कार्यवाही र दवाबका मागहरुले आममधेशीलाई अपमानित हुनु पर्थ्यो। हुन त आज पनि आम रास्ट्रवादी नेपाली हरु अपमानित नै भा छन्। चाइना परस्त पत्रकार, बुद्धिजीवी, मिडिया, कर्मचारी, नेता र गुलाम मानसिकताले” प्रहरीलाई पिटेको ठिक हो। प्रहरीले सन्तुलन गुमाए। चाइनिजमाथीको आक्रमण गलत थ्यो। घर फर्किन खोज्या थ्यो, सिंहदरबार कब्जा गर्न आएका थिएनन” लगायतका बिचार पढेर आफै लज्जित हुनु परेको छ। बैधनाथ भाइ तपाईंको प्रश्न म सङ हुनु नै आफैमा दुईटा प्रश्न हो । हिजो सम्म मैले देश भक्त, बुद्धिजीवी र नागरिक अगुवा मानेका मध्ये कतिपयले आफनो मातृभुमीको बिरुध उभेको हेर्दा अश्रय पीडा भो। यो थप्पड प्रहरीमाथी होइन, प्रत्येक आम नेपाली माथी हो। हाम्रो स्वभिमान माथी हो।
पत्रकारिता क्षेत्रका हस्तीहरुको मौनताले उनको गुलामी र सलामी समेत देखायो। प्रहरीले मधेशीलाई गोली हान्द चुप बसेर प्रहरीले ठिक गर्यो भनी समर्थनगर्नेहरु आज प्रहरीलाई नै गलत सावित गर्न थालेका छन्। राज्य कमजोर भो, बैधनाथ भाइ। बौद्धिक गुलामी र भारत बिरोधी रास्ट्रवादले सिङो नेपाल लाई आज विश्व सामु अपमानित गरायो। एउटा तानाशाहको खाचो भो। जसले हरेक किसिमका गुलाम, देशद्रोही, बैइमान, भ्रस्टाचारी र दलालहरुलाई ठाउँका ठाउँ सिद्द्याउन सकोस।’ भनेका छन् ।
साथै उनले विदेशी नागरिकले हाम्रो सुरक्षाकर्मी माथि हातपात गर्ने हिम्मत कहाँबाट ल्यायो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् । नेपाली सुरक्षाकर्मी माथि हातपात आम नेपालीको अपमान भएको भन्दै आक्रमण गर्ने ती चिनीयाँहरुलाई हदैसम्मको कार्वाहीको माग गरेका छन् ।
बैशाख २७, २०७७ शनिवार ११:१७:०२ बजे : प्रकाशित